Abasebenzisi abangu-97% banelisekile nge-Apple Watch | yabo Ngivela kwa-mac
Izinga lokwaneliseka kwe-Apple Watch liphakeme kunele-iPhone yokuqala noma i-iPad
UMiguel Angel Juncos | | Apple, I-Apple Watch, Izaziso, Imikhiqizo ye-Apple
Ngemuva kokuthengiswa okumangazayo ekwethulweni kwayo okunokubhuka okungaphezu kwesigidi, iwashi le-apula Kubonakale ngathi kuzokwethulwa inkanyezi kwabaseCalifornia e-Apple. Iqiniso akulona lokhu futhi akukhona ukuthi konke bekungumbhede wama roses kulokhu okugqokekayo, ukuthengisa kulahlekelwe umusi ngokuhamba kwesikhathi, kusala emayunithi amancane angama- "30.000" ngosuku ngemuva kwamasonto ambalwa, impela ngenxa yezinto ezifana nentengo wewashi ezinhlotsheni zalo ezihlukile noma ukusetshenziswa kwangempela kwezicelo lapho konke kuseluhlaza okuncane ngokusho kokuhlaziywa okuhlukile.
Kodwa-ke, akuyona yonke into ebingeyinhle futhi lokho ngokusho kwenkampani iWristly, ocwaningweni olwenziwe kwinani elithile labasebenzisi bebelokhu benethemba. Ngokwemiphumela, le Apple Watch ngokweneliseka okungu-97% idlula i-iPhone yokuqala ngo-92% ne-iPad yasekuqaleni ngama-91%, kuphela i-iPhone yamanje ene-99% edlula i-Apple Watch.
Ngokuqondile, lolu cwaningo lwenziwa phakathi kwabanikazi abangaphezu kuka-800 be-Apple Watch, kwalaba, Ama-66% amenyezelwe ukuthi "aneliseke kakhulu" noma «bajabule» ngedivayisi, kuyilapho ama-31% ayenelisekile impela », u-2% kuphela omenyezelwe ukuthi« akanelisekile futhi awaneliseki »ngo-1% kuphela ababenganelisekile«.
Ngokusobala lokhu akusona isivivinyo esingathathwa njengesethenjwa sombono womhlaba wonke njengoba isampula yocwaningo incane kakhulu, kepha ingathathwa njengesiqondisi sokubona izinga lokwaneliseka kwale Apple Watch.
Ngokuya ngeBajarin (omunye walabo ababhekele isifundo) singafunda isitatimende esifuna ukwazi:
Ngenkathi ngilalele abantu abehlukene bengitshela konke nge-Apple Watch yabo, ngikwazile ukubona iphethini eliziphindayo kaninginingi. Labo inhloso yabo bekuwukujikeleza yonke imisebenzi ye-Apple Watch noma eyeqisa kakhulu maqondana nobuchwepheshe okungabokuqala ukuthenga lolu hlobo lomkhiqizo, konke babegxeka kakhulu iwashi. Ubungabona ukuthi bahlole futhi bacabanga ngokujulile ngakho kuzo zonke izinhlangothi ngezimpendulo ezitholakele. Ngibe sengikhuluma nabantu "abajwayelekile", okungukuthi, othisha, izicishamlilo, abasebenzela imishwalense kanye nabantu bebonke ababengahlobene ngandlela thile nomkhakha wezobuchwepheshe. Lawa maqembu abantu awanakuyeka ukuncoma ubuhle be-Apple Watch nokuthi bawuthande kangakanani umkhiqizo. Kwakucishe kube sengathi okude kakhulu emhlabeni we-tech kuyithanda kangcono i-Apple Watch.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Izinga lokwaneliseka kwe-Apple Watch liphakeme kunele-iPhone yokuqala noma i-iPad
Iziphathimandla ezintsha zijoyina amabutho akwa-Apple ukuyilolonga le moto enamahemuhemu amaningi
I-Spotify igxila kuhlu lwadlalwayo ngokwezifiso Ngemuva kokuqaliswa kwe-Apple Music